शुक्रवार, फाल्गुन १४, २०७७ १२:४७:४४
आइतवार, माघ ११, २०७७ गोदावरी न्युज
बैतडी - गाउँघरमा चिकित्सक कार्यक्रम अन्तर्गत बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिकाको कुलाउ स्वास्थ्यचौकीमा दुई दिने निशुल्क स्वास्थ्य शिविर शनिबार सम्पन्न भएको छ । शुक्रबारदेखि शुरु भएको शिविरमा जनरल ओपडी सेवा, अल्ट्रासाउण्ड सेवा, प्रयोगशाला सेवा, परिवार नियोजन सेवा, दन्त सेवा लगायतका सेवाहरु प्रदान गरिएका जिल्ला अस्पताल बैतडीका प्रमुख डा. वसन्तराज जोशीले जानकारी दिए ।
ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकलाई गाउँघरमै पुगेर स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले शिविरको आयोजना गरिएको उनले जानकारी दिए । शिविरमा दुई दिनमा ६ सय बढी नागरिकले सेवा लिएको उनले जानकारी दिए। शिविरमा चिकित्सक सहितको टोलीद्वारा विभिन्न सेवा प्रदान गरिएका थिए ।
जिल्ला अस्पतालमा पुग्न सहज नभएका पालिकाका नागरिकलाई गाउँघरमै चिकित्सक पुगेर सेवा उद्देश्यले शिविरको आयोजना गरिएको डा.जोशीले बताए । चालु आर्थिक बर्षमा जिल्लाका ५ ओटा दुर्गम पालिकामा शिविर सञ्चालन गरेर विभिन्न सेवा एकीकृत रुपमा दिने लक्ष्य रहेको जिल्ला अस्पतालले जनाएको छ ।
विभिन्न समस्याका कारण सुविधा सम्पन्न अस्पतालहरुमा जान नपाएका नागरिकलाई गाउँघरमै स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्य सहित शिविरको आयोजना गरिएको हो । शिविरले दुर्गम क्षेत्रका नागरिक लाभान्वित भएका डा. जोशीले बताए। जिल्लाका अन्य स्थानीय तहहरु छिटै कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताइएको छ ।
प्रकाशित मिति: आइतवार, माघ ११, २०७७, ०१:५७:००